के तपाईंलाई थाहा छ तपाईं रातको बत्तीको अध्ययन नगरीकन चलाख बन्न सक्नुहुन्छ? यदि त्यहाँ एक पाउडर थियो जसले तपाईंलाई मद्दत सुधार गर्न वा तपाईंको जागृति बढाउन मद्दत गर्न सक्छ, के तपाईं यसलाई लिनुहुन्छ?
आज, स्मार्ट ड्रग्स, Nootropics को रूपमा पनि चिनिन्छ, धेरैको लागि प्रिय बनिरहेको छ। यसको कारण यो हो कि तिनीहरू दिनको जीवनको लागि एक राम्रो दिनको लागि परिचित छन्। Nootropic लाभ ध्यान को लामो अवधि, अधिक एकाग्रता, ध्यान बढाएको साथ एक सतर्क मस्तिष्क को सीमा हो।
तपाईंले याद गर्नुहुनेछ कि त्यहाँ विद्यार्थीहरू छन् जो सम्झन मा धेरै राम्रो छैनन् र धेरै परीक्षा बिना आफ्नो परीक्षा Ace गर्न को लागी हुनेछ। साथै, त्यहाँ उच्च-स्टेट रोजगार भएका व्यक्तिहरू छन् जुन सबै दिन उच्च सांद्रता कायम राख्न चाहन्छ।
त्यसमाथि, केहि व्यक्तिहरू प्रयोग गर्छन् nootropics र स्मार्ट ड्रग्स पाउडर Alzheimer's, Hunnington रोग, पार्किन्सन, र ADHD जस्तै मोटर समारोह विकारहरू ब्यवस्थापन गर्न। यो त्यस्ता कारणहरूको लागि हो कि तपाइँ अन्यत्रको अगाडि रहनको लागि Nootropics प्रयोग गर्ने विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
यस टुक्रामा, हामीले माथि १ 15 संकुचित गरेका छौं नोट्रोपिक पाउडरहरू र केले तिनीहरूलाई बाहिर खडा गर्दछ।
बिभिन्न प्रकारको nootropics बुझ्दै
पछिल्ला विगतमा, स्मार्ट ड्रग्स उद्योग बृद्धि भएको छ, नूट्रोपिक्स पहिले भन्दा पहिले उपलब्ध भएको छ। यहाँ छ वटा कोटीहरू छन् जुन Nootropics मा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ;
यी केहि काउन्टरमा बेचिएका व्यापक रूपमा प्रयोग हुने संज्ञानात्मक वृद्धिहरू हुन्। उनीहरूको बारेमा राम्रो कुरा के हो भन्ने तथ्य यो हो कि उनीहरूले एक उत्तेजक वा शामकको रूपमा अभिनय नगरीको संज्ञानात्मक प्रकार्य सुधार गर्दछ। यद्यपि वैज्ञानिकहरूले अझैसम्म उनीहरूको कार्य गर्ने संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा बुझेका छैनन्, भनिन्छ उनीहरूले रगत प्रवाह बढाउँछन् र अक्सिजन खपत दिमागका केही अंश हुन्।
भाग्यवस, तिनीहरू सजीलो रूपमा पहुँच योग्य छन् तपाईं सजीलै तिनीहरूलाई अनलाइन फेला पार्न सक्नुहुनेछ। साथै, अहिलेसम्म साइड इफेक्टको धेरै थोरै घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको छ।
सामान्यतया, यस वर्गका धेरै जसो औषधि राम्रोसँग काम गर्छन् जब लामो अवधिमा प्रयोग गरिन्छ। यसको मतलब शिखर लाभहरूको आनन्द लिनको लागि, तपाईंले यसलाई केही हप्ताहरूको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ।
कुनै पनि nootropic हर्बल, जैविक, वा प्राकृतिक मानिन्छ यस वर्गमा पर्छ। प्राय: तिनीहरू प्राय: बोटबिरुवामा आधारित हुन्छन् र प्राकृतिक फाइदाहरू दिन्छन्। यस वर्गका ड्रगहरू प्राय: रुचाइन्छन् किनकि तिनीहरू प्रयोग गर्न सुरक्षित छन् किनकि तिनीहरूसँग कृत्रिम यौगिक वा रसायन हुँदैन।
मुख्य कमजोरी मध्ये एक हो कि उनीहरूले सिंथेटिक नूट्रोपिक्सको तुलनामा पंच प्याक गर्दैनन्। त्यसकारण कुनैले सिन्थेटिकको जस्तै प्रभाव लिन धेरै उच्च डोज लिन आवश्यक पर्दछ।
भिटामिन बी डेरिवेटिवहरू
जस्तै नामले सुझाव दिन्छ, भिटामिन बी डेरिवेटिवहरू न्युट्रोपिक्स हो बि बी भिटामिनबाट लिइएको उत्तम बेनिफिटहरू निकाल्न। तिनीहरूले मस्तिष्कमा ग्लूटामेट, कोलाइन, र डोपामाइन स्तरलाई असर गर्छन्, र यसले तिनीहरूलाई एडीएचडी जस्ता डिजेनेरेटिव संज्ञानात्मक विकारहरूको उपचारमा उपयोगी बनाउँदछ।
अन्तमा, यी व्युत्पन्नहरू शारीरिक र मानसिक थकानको उपचारका साथसाथै मेमोरी अवधारणमा सुधारको लागि प्रयोग गरिन्छ।
तपाईंले सायद विगतमा पेप्टाइडको बारेमा सिक्नुभयो। तिनीहरू प्राकृतिक रूपमा एमिनो एसिडले बनेको जैविक अणुहरू देखापरिरहेका हुन्छन् र जुन सहसंयोजक रासायनिक बन्धनहरू द्वारा जोडिएको हुन्छ। यद्यपि तिनीहरू सजीलो रूपमा पहुँच योग्य छैन, Noopept अनलाइन र स्टोरहरूमा उपलब्ध छ। पेप्टाइडहरू शक्तिशाली छन् र यसले उत्प्रेरणा, मेमोरी, मानसिक उर्जा, सिक्ने क्षमताहरू, र सतर्कता सुधार गरेको देखाउँदछ।
कोलाइन स्वाभाविक रूपमा शरीरमा पाइन्छ, तर हामी कहिलेकाँही यसको अभावबाट ग्रस्त हुन सक्छौं। फलस्वरूप, यसले कम संज्ञानात्मक क्षमताहरू निम्त्याउँदछ त्यसैले मस्तिष्कको समग्र कल्याणमा कमी गर्दछ। Choline nootropics लिने एसिटिचोलिन न्यूरोट्रान्समिटरको मस्तिष्कको उत्पादन बढाउन मद्दत गर्दछ।
Choline सप्लीमेन्ट या त आफैंमा वा रेसट्यामसँगै लिन सकिन्छ। जब सँगै स्ट्याक गरिन्छ, ती बढि मेमोरी, सिक्ने क्षमताहरू, र समग्र मुडमा सुधार ल्याउँछन्।
एम्पाकिन्सहरू सबैभन्दा शक्तिशाली नूट्रोपिक्स हुन् जुन हालसालै प्रस्तुत गरिएको थियो। तिनीहरू दिमागमा ग्लुटामेट रिसेप्टर्सको उत्तेजनाका माध्यमबाट कार्य गर्दछन्। नतिजाको रूपमा, उनीहरूले ग्लूटामेटको स्तर बढाउँछन्, जसले परिणाम स्वरूप सिक्ने र मेमोरी सुधार गर्दछ।
सबै भन्दा राम्रो समग्र nootropic पाउडर: मेमोरी सुधारको लागि उत्तम Nootropic: एथलेटिक प्रदर्शन को लागी सर्वश्रेष्ठ nootropic:
शुद्धता ≥ 98 Fl फ्लोमडाफिनिल पाउडर
शुद्धता- 98%% प्रमीरासिटाम पाउडर
शुद्धता- 98%% कार्फेडन पाउडर
किन हामी यो pised:
कम डोजमा पनि यो धेरै प्रभावकारी छ।
केही साइड इफेक्टहरू।
तपाईंले यसको प्रभाव तीस मिनेट भित्रमा लिनुभए पछि महसुस गर्नुहुनेछ।
दीर्घ-स्मृति मेमोरी गठनको सहायताले सम्झनाको स्तरहरू उच्च पार्दछ
यसले एक लाई धेरै साइड इफेक्ट बाट ग्रस्त बनाउँदैन। अर्थात्, euphoric प्रभाव
यो लिने को 1-2 घण्टा भित्र मा लात
महत्त्वपूर्ण उत्तेजक प्रभाव प्रदान गर्दछ
यो द्रुत रूपमा शरीरमा समाहित हुन्छ
शिखर स्तर यसको आवेदन को एक घण्टा भित्र पुगेको छ।
यहाँ शीर्ष १ No Nootropics स्मार्ट औषधि पाउडर छन्:
सबै भन्दा राम्रो समग्र nootropic पाउडर - Flmodafinil पाउडर
मेमोरी सुधारको लागि उत्तम nootropic - Pramiracetam
एथलेटिक प्रदर्शन-कार्फेडन पाउडरको लागि सर्वश्रेष्ठ नूट्रोपिक
जागरणको लागि उत्तम nootropic- Adrafinil पाउडर
उत्तम बुद्धिमत्ता वृद्धिकर्ता - फ्लाड्राफिनिल (CRL-40,941) पाउडर
उत्तम ध्यान प्रमोटर- Hydrafinil (9-Fluorenol) पाउडर
उत्तम छिटो अभिनय nootropic- Noopept (GVS-111) पाउडर
न्यूरोप्रोटेक्शन-नेफिरासेटम पाउडरको लागि सर्वश्रेष्ठ नूट्रोपिक
उत्तम मानसिक वर्धक- Aniracetam पाउडर
Alzheimer रोग- J-147 पाउडर को उपचार मा सबै भन्दा राम्रो nootropic
उत्तम एंटीएजिंग नूट्रोपिक-म्याग्नेशियम L-Threonate पाउडर
कार्डियाक फंक्शनको प्रमोटनमा उत्कृष्ट nootropic- निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड पाउडर
मधुमेह उपचार को लागी राम्रो nootropic - Galantamine हाइड्रोब्रोमाइड पाउडर
गर्भाशय ग्रीवाको क्यान्सर - कम्पाउन्ड P पी पाउडरसँग लड्न सबै भन्दा राम्रो nootropic
उत्तम ग्लुटाथियोन वर्धक - N-Acetyl-L-cysteine ​​ईथिल एस्टर पाउडर
२०१ 15 मा सब भन्दा राम्रो १ smart स्मार्ट ड्रग नूट्रोपिक पाउडर तुलना गर्नुहोस्
NAME दर्जा साइड इफेक्ट सिफारिस गरिएको DOSAGE आधा जीवन
Flmodafinil पाउडर5धेरै कम 100-200mg प्रति दिन 12-15 घण्टा
Pramiracetam पाउडर5धेरै कम 600-1200mg प्रति दिन 5-6 घण्टा
Carphedon पाउडर5केहि 200-750mg प्रति दिन 3-5 घण्टा
Adrafinil पाउडर 4.5 केहि 600-900mg प्रति दिन 12-15 घण्टा
फ्लाड्राफिनिल पाउडर5सानोदेखि कुनै साइड इफेक्ट छैन 100-200mg प्रति दिन 6-7 घण्टा
हाइड्राफिनिल पाउडर 4.5 केहि 50-150mg प्रति दिन 6-8 घण्टा
Noopept popwder5केहि 30-60mg प्रति दिन 3-6 घण्टा
Nefiracetam पाउडर 4.5 धेरै कम 600-900 mg प्रति 3-5 घण्टा
Aniracetam पाउडर5केहि 1500mg 1-2.5 घण्टा
J-147 पाउडर5धेरै 20-30mg 1.5-2.5 घण्टा
म्याग्नेशियम L-Threonate पाउडर5केहि 1500-2000mg 44 घण्टा
निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड पाउडर 4.5 धेरै कम 1000-2000mg 5.3 घण्टा
गलान्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइड पाउडर4धेरै 4-8mg7घण्टा
7P पाउडर5केहि 5000mg 1-2 घण्टा
N-Acetyl-L-cysteine ​​ईथिल एस्टर पाउडर 4.5 केहि 5000mg 5.6 घण्टा
सबै भन्दा राम्रो समग्र nootropic पाउडर
१. शुद्धता ≥ 1 98 फ्लोमडाफिनिल (CRL-40,940) पाउडर 90280-13-0
कसैको लागि प्रणालीमा धेरै पम्प नगरी अत्यन्त प्रभावकारी नूट्रोपिक खोज्नको लागि, त्यसपछि फ्लोमाडाफिनिल पाउडर वास्तविक सम्झौता हो। यो प्रयोग गर्न पाउँदा खुसीको कुरा हो किनकि फ्लोमडाफिनिल डोज आवश्यक १००-२००mg दैनिक दुई पटक विभाजित हुन्छ। प्रयोगकर्ताहरूद्वारा दिइएका फ्लोमडाफिनिल समीक्षाहरूबाट यो प्रस्ट छ कि यस नूट्रोपिकले तपाईंलाई यसको एक सानो रकम मात्र लिएर बोसको अनुभूति गराउँदछ।
यसले कसैको संज्ञानात्मक क्षमता र उत्पादकता वृद्धि गर्न को लागी हिस्टामाइन, ओरेक्सिन, ग्लूटामेट, र नोरिपाइनफ्रिन स्तरको मात्रा बढाउँदै प्रमाणित गरेको छ। यस बाहेक यसले शरीरमा डोपामाइन बिच्छेदन रोक्न पनि काम गर्दछ।
यद्यपि यो बजारमा सब भन्दा नयाँ मध्ये एक हो, यो टेबुलमा ल्याउने फाइदाहरूको कारण यो उत्तम नूट्रोपिक्स पाउडर हो। ती मध्ये एक एकको सिक्ने र रिकल गर्ने क्षमतामा बृद्धि हो।
दोस्रो, यो एक नियमित मूड को बहाली को माध्यम बाट सामान्य उदासीनता को उपचार मा सहायता गर्दछ। यसले एडीएचडी र अन्य सर्तहरू पनि सम्बन्धित छ जुन ध्यान-सम्बन्धित छन्। थप रूपमा, फ्लोमडाफिनिल जागृति वृद्धि, प्रेरणा, र फोकस सुधार गर्न, र अझ राम्रो व्यक्तिको मानसिक प्रदर्शनको रूपमा जानिन्छ।
जब फ्लोडाफिनिल बनाम मोडाफिनिलको तुलना गर्ने क्रममा धेरै सुविधाहरू जुन गणनामा आउँदछन्, उदाहरणका लागि, फ्लामोडाफिनिल साइड इफेक्ट मोडाफिनिलको तुलनामा धेरै थोरै हुन्छन्। यद्यपि तिनीहरू उस्तै चीज देखिन्छन्, तिनीहरूको संरचनात्मक सूत्र एकदम फरक छ, र यसले फ्लोडोडाफिनिललाई अधिक जैवउपलब्ध बनाउँछ।
Flmodafinil वैधता को रूपमा, यो तपाईं हो देश मा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि, क्यानाडामा फ्लमोडाफिनिल पाउडर किन्नको लागि तपाईंलाई प्रिस्क्रिप्शनको आवश्यक पर्दैन, जबकि तपाईंलाई युरोपमा फ्लोमडाफिनिल खरीद गर्न तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ।
यदि तपाईं कहाँ फ्लोमडाफिनिल पाउडर किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईले अगाडि हेर्नु हुँदैन। तपाईं अधिक सुविधाजनक र सस्तो विकल्पको रूपमा फ्लोमडाफिनिल अनलाइन खरीद गर्न रोज्न सक्नुहुन्छ। हामी कानूनी nootropic पाउडर स्रोत हो जहाँ तपाईं CRL-40,940 Flmodafinil पाउडर किन्न सक्नुहुन्छ।
यसले हिस्टामाइन, ओरेक्सिन, डोपामाइन, ग्लूटामेट, र नोरेपाइनफ्रीन स्तर परिवर्तन गरेर काम गर्दछ।
सिफारिस गरिएको खुराक प्रति दिन १००-२००mg हो।
यो जनावरहरूमा परीक्षण गरिएको छ।
मेमोरी सुधारको लागि सर्वश्रेष्ठ Nootropic
२ शुद्धता- 2%% प्रमीरासेटम पाउडर 98 68497 62----१
चाहे तपाई उनीहरूको अन्तिम परीक्षाहरू गर्न खोज्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ वा एक खैरो वरिष्ठ जसले उनीहरूको खैरो पदार्थलाई जोगाउन चाहन्छन, तब pramiracetam तपाईको लागि हो। यो उत्तम nootropic हो जब यो एक मजबूत मेमोरी कायम गर्न को लागी आउँछ। प्रमिरसेटम रेसटम परिवारसँग सम्बन्धित छ तर दौडटाम भन्दा तीस गुणा शक्तिशाली छ।
Pramiracetam पाउडर मस्तिष्क मा choline अपटेक र नाइट्रिक अक्साइड उत्पादन को दर वृद्धि गरेर काम गर्दछ। मुख्य Pramiracetam लाभहरू समावेश: फोकस मा सुधार र कुनै पनि मस्तिष्क घाइते बाट रिकभरी। यसले अम्नेसियालाई उल्टाउन र रोक्न पनि मद्दत गर्दछ।
Pramiracetam स्ट्याक अक्सर मस्तिष्क मा कम acetylcholine स्तर प्रतिरोध गर्न र संज्ञानात्मक समारोह सुधार गर्न कोलाइन स्रोत हो। यो Adrafinil, Armodafinil, र Modafinil संग पनि स्ट्याक गर्न सकिन्छ। Pramiracetam बनाम Phenylpiracetam तुलना गर्दा, यो स्पष्ट छ कि Pramiracetam चिडचिड, मतली, र पछिल्लो जस्तै टाउको दुखी जस्तै साइड इफेक्ट पैदा गर्दैन।
यदि रिटेल वा थोक पाउडरमा प्रमीरासेटम किन्नको लागि योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं जहिले पनि हामीमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ।
योसँग कार्यको द्रुत शुरुआत छ।
Hyperstimulation को नेतृत्व बिना साइको उत्तेजना प्रदान गर्दछ।
उपचारको अवधि छोटो छ।
यो फ्याट-घुलनशील हो त्यसैले राम्रोसँग सँगै खानासँगै लिइन्छ।
एथलेटिक प्रदर्शन को लागी उत्कृष्ट nootropic
P शुद्धता ≥3Car कार्फेडन (फेनिलिपिरासेटम) पाउडर 98२-77472०-70
कार्फेडन एक piracetam डेरिवेटिव हो जसको piracetam सँगको शारीरिक भिन्नता योसँग जोडिएको फिनाइल समूह हो। यस समूहको कारणले, फेनिलिपिरासेटम पाउडर डोजलाई समान प्रभाव दिनको लागि आवश्यक पिरसिटाम कम छ र पाइरासेटम भन्दा २०-20० गुना बढी शक्तिशाली मानिन्छ।
अधिकांश Phenylpiracetam समीक्षा यसको उत्तेजक प्रभावहरूको कारण एथलेटिक प्रदर्शन बृद्धि गर्न यसको प्रभावकारिताको बारेमा बडबड गर्दछ। यसले मानिसहरूलाई चिसो प्रतिरोध गर्न पनि मद्दत गर्दछ। अन्य फाइदाहरूमा मिरगी, स्ट्रोक, मेमोरी डिसआर्डर, र थकानको व्यवस्थापन शामिल छ।
Phenylpiracetam सुत्ने को समयमा लिनु हुँदैन किनभने यसले निद्रा गडबडी निम्त्याउन सक्छ। साथै, तपाईले हप्तामा दुई वा चार पटक लिनुपर्दछ वा चक्रमा शरीरलाई उत्तेजक प्रभावमा सहनशीलता निर्माण गर्नबाट रोक्नको लागि।
जागरणको लागि उत्तम nootropic
P शुद्धता ≥4Ad एड्राफिनिल पाउडर 98-१-63547--।
यदि तपाईंको उद्देश्य जागृति बढाउने र निद्रा कम गर्ने हो भने, त्यसोभए तपाईंले एड्राफिनिल पाउडर लिने विचार गर्नुपर्छ। बहुसंख्यक एड्राफिनल समीक्षाहरूले देखाउँदछ कि यो एक बढि समयावधिहरूका लागि जागा रहनको लागि सहयोग पुर्‍याउँछ। Adrafinil बनाम को सर्तमा। Modafinil आधा जीवन, पछिल्लो एक लामो छ। Adrafinil तथापि मोडाफिनिलमा रूपान्तरित हुन्छ जबकि शरीरमा यसको आधा जीवनमा थप्दा लामो समयसम्म चल्ने प्रभावहरू।
अन्य Adrafinil प्रभाव बढ्दो ध्यान समावेश; कसैको सिकाउने क्षमता र समर्थन स्मृति सुधार। यद्यपि यसले केही साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ, यो एक सुरक्षित उत्तेजकका रूपमा मानिन्छ किनकि यसले उत्तेजकसँग सम्बन्धित धेरैजसो अप्रिय साइड इफेक्टहरू पैदा गर्दैन।
यो पानी वा सिट्रस जूसको साथ उत्तम लिइएको कडल एड्राफिनिल पाउडर स्वादका कारण लिइन्छ। किनकि यो प्रायः देशहरूमा वैधानिक छ, तपाईं प्रिस्क्रिप्शनको आवश्यकता बिना नै अनड्राफिनिल पाउडर अनलाइन किन्न सक्नुहुनेछ।
सिफारिस गरिएको खुराक लगभग -००- 600 ००० मिग्रि हो।
यो Adrafinil प्रभावहरू१२-१-12 घण्टा सम्म।
यो दैनिक वा विस्तारित समयावधि लिनु हुँदैन किनभने यसले सहिष्णुता निर्माण गर्दछ।
उत्तम बुद्धिमत्ता बृद्धि गर्ने
P शुद्धता ≥%% फ्लाड्राफिनिल (CRL-5) पाउडर 98-40,941-90212
के तपाइँ यस्तो चीज खोज्दै हुनुहुन्छ जुन सम्भाव्यताको लागि तपाइँले सपना देखेको भन्दा बढि मद्दत पुर्‍याउँछ? फ्लाड्राफिनिल पाउडर कसैको मानसिक स्पष्टता र क्षमता बढाउनमा सर्वश्रेष्ठ औषधि हो। यसले डोपामिन बिच्छेद रोक्न कार्य गर्दछ त्यसैले भावनात्मक प्रतिक्रियाहरू, सिकाई, र ध्यानको नियमन।
फ्लाड्राफिनिल मोडाफिनिल पाउडरसँग मिल्दोजुल्दो छ उनीहरूको संरचनाको रूपमा र प्रभावहरूमा मात्र फरक पर्दछ अतिरिक्त फ्लोराइड अणु। थपले फ्लाड्राफनिललाई सजिलै शरीरमा समाहित गर्दछ।
फ्लाड्राफिनिल साइड इफेक्टहरू थोरै छन्, तर तिनीहरूको गहनता स्थिर प्रयोगको साथ बढ्न सक्छ। भाग्यवस, यो सजिलैसँग उपलब्ध छ, र यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं फ्लाड्राफिनिल अनलाइन किन्न सक्नुहुन्छ।
यो फ्लाड्राफिनिल खुराकएक दिनमा १००-२०० मिलीग्राम हुनुपर्दछ।
यो फ्लाड्राफिनिल साइड इफेक्टहरूविरलै हुने गर्छ।
यो Adrafinil र Modafinil भन्दा 3-4 गुणा अधिक शक्तिशाली छ।
सर्वश्रेष्ठ ध्यान प्रमोटर
P शुद्धता- 6%% हाइड्राफिनिल (--फ्लोरेनोल) पाउडर १98 9। --1689-१
हाइड्राफिनिल पाउडर, जसलाई फ्लुओरेनोल पनि भनिन्छ। डोपामाइन रिउपटेक इनहिबिटर हो जसको मुख्य प्रभाव भनेको ध्यान बढाउनु हो। अन्य हाइड्राफिनिल फाइदाहरूमा बृद्धि गरिएको मानसिक उर्जा, उत्तम एकाग्रता, र थकान घटाउनु समावेश छ।
हाइड्राफिनिल कार्य संयन्त्रमा हिस्टामाइन, नोरपाइनफ्रिन र ग्लुटामेट स्तरको बृद्धि सहितको मुड बृद्धि हुन्छ। जब हाइड्राफिनिल बनाम मोडाफिनिल जैव उपलब्धता तुलना गर्दै, हाइड्राफिनिल नूट्रोपिकले छोटो छ भनेर प्रदर्शन गरेको छ।
यसको बिक्री अनियमित छ त्यसैले तपाईं कच्चा हाइड्राफिनिल (--फ्लोरेनोल) कुनै समय तपाईं चाहानुहुन्छ खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
यो अन्य Nootropics को तुलनामा सस्तो छ।
हाइड्राफिनिल कम उत्तेजक छ त्यसैले केही प्रतिकूल प्रतिक्रियाहरू।
यो हाइड्राफिनिल प्रभावहरूसूक्ष्म हुन मानिन्छ।
सर्वश्रेष्ठ छिटो अभिनय nootropic
P शुद्धता- 7%% Noopept (GVS-१११) पाउडर १98१111--157115-85-०
Noopept पाउडर एक सिंथेटिक nootropic व्यापक रूपमा पूरकको रूपमा लिन्छ। यो सब भन्दा छिटो अभिनय गर्ने स्मार्ट औषधि हो किनकि तपाईले यसको प्रभाव केही मिनेटमा महसुस गर्नुहुनेछ। यदि तपाइँ Noopept कसरी कार्य गर्दछ भनेर सोचिरहनु भएको छ भने, त्यसो भए म तपाइँलाई कसरी बताउँछु। यसको कार्य संयन्त्रले दुई आवश्यक मस्तिष्क रसायनहरूमा वृद्धि समावेश गर्दछ; NGF र BDNF।
Noopept लाभ एक व्यक्तिको स्मृति, स्पष्टता, सोच को गति, ध्यान, सकारात्मकता, र उत्साह मा एक सुधार समावेश छ।
एक मात्र उल्लेखनीय Noopept साइड इफेक्ट टाउको दुखाइ हो कि एक उच्च खुराक लिन वा पहिलो पटक Noopept nootropic पाउडर प्रयोगको परिणाम हो। Noopept को फाइदा यो हो कि यो कानुनी हो र केहि देशहरूमा मात्र नियमित छ। यसको मतलब यो हो कि यदि तपाईंलाई Noopept किन्न आवश्यक छ भने, तपाईंले आफ्नो देशको कानूनहरू विचार गर्नु आवश्यक छ। यो गरेर, तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईंलाई प्रिस्क्रिप्शन चाहिएको छ वा छैन।
यो Noopept खुराकप्रति दिन -०-30० मिलीग्राम हो।
यो धेरै सहन योग्य छ र कम साइड इफेक्टको साथ आउँदछ।
यो choline संग उत्तम स्ट्याक छ।
न्यूरोप्रोटिकेसनको लागि सर्वश्रेष्ठ नूट्रोपिक
P शुद्धता- 8%% नेफिरासेटम पाउडर 98 77191१ 36 --7-XNUMX
स्ट्रोकको शिकार भएपछि धेरै बिरामीहरूलाई दौरा पर्न सक्ने बताइएको छ, जसले दिमागी क्षतिको साथ साथै मेमोरी गुमाउन सक्छ। भाग्यवस, Nefiracetam दौराबाट बचाउन को लागी साबित भएको छ। यसले एनएमडीए सिग्नलिंग नियन्त्रण गरेर गर्छ जुन ग्लूटामेट स्तरको उकालो विरूद्ध रोक्छ।
यो रेसटम सदस्यहरूको नयाँ सदस्यहरूमध्ये एक हो, र यसको अन्य फाइदाहरूमध्ये मुड, शिक्षा, र मेमोरीको बृद्धि गर्दछ। Nefiracetam VS aniracetam तुलना गर्दा, प्राय: nefiracetam ले रिपोर्ट गर्दछ कि यसले एकको मुडमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउँछ।
नेफिरासेटम साइड इफेक्टहरू थोरै छन्, त्यसैले यसलाई सुरक्षित र राम्रोसँग सहन गरिन्छ।
यो एक फ्याट-घुलनशील औषधि हो; तसर्थ, piracetam को तुलनामा कम खुराकहरू बढी प्रभावकारी हुन्छन्।
नेफिरासेटमले पशु अध्ययनका साथै केही मानवीय अध्ययनहरू पनि गरिसकेका छन्।
खुराक प्रति दिन 100mg-900mg हो, दुई पटक लिन्छन्; एउटा बिहान सबेरै र दोस्रो दिउँसो।
उत्तम मानसिक बृद्धि गर्ने
P शुद्धता- 9%% Aniracetam पाउडर 72432-10-1
स्मार्ट पाउडर aniracetam एक एम्पाकिन नूट्रोपिक हो जो piracetam भन्दा बढी शक्तिशाली छ। यो पदक लिन्छ जब यो मानसिक बृद्धि गर्न आउँदछ र AMPA रिसेप्टर्सहरूलाई उत्तेजित गरेर काम गर्दछ; सामान्य CNS ग्लूटामेट रिसेप्टर। AMPA रिसेप्टर्सले सम्झनाको निर्माण र सिक्नको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
एनिरसेटम पाउडरको अन्य फाइदाहरूमा रिफ्लेक्स्समा वृद्धि, चिन्ता घटाउने, र धारणा वृद्धि समावेश छ। प्यारासिटामको तुलनामा कम कम साइड इफेक्टले यसले निम्त्याउँदछ यो कफीको कपको भन्दा कडा भन्दा कडा भएका यसको परिणामहरू उल्लेख नगर्न यसलाई अझ लोकप्रिय बनाउँदछ।
Aniracetam पाउडर दिमाग को व्युत्पन्न neurotrophic कारक, जो मस्तिष्क मलको रूपमा कार्य गर्दछ को वृद्धि गरेर एक को मस्तिष्क क्षमता उच्च गर्दछ।
यो अत्यधिक फ्याट-घुलनशील हो।
यो Aniracetam खुराकएक दिनमा दुई पटक १००mg विभाजित गरिएको छ।
एक महसुस गर्न सक्नुहुन्छ Aniracetam प्रभाव१ taking-२० मिनेट लिने पछि।
Alzheimer रोग को उपचार मा सबै भन्दा राम्रो nootropic
१० शुद्धता ≥ 10% जे -१ 98 पाउडर ११147 1146963-51--0१-०
J147 पाउडर २०११ मा विकसित गरिएको एक nootropic हो, र यसले मेमोरी नोक्सन, ढिलो वा उल्टाउन अल्जाइमर रोगलाई उल्ट्याउन सक्छ। यो फेनिल हाइड्रोक्साइड समूहसँग सम्बन्धित छ र कर्क्युमिनको करी मसलाको घटकबाट लिइएको हो।
J147 mitochondria मा ATP संश्लेषण गतिविधि घटाएर काम गर्दछ। यस मार्फत, यसले न्यूरोनल कोषहरूलाई उमेर सम्बन्धित दिमाग विषाक्तताहरूबाट जोगाउँछ। यो अनुसन्धान अनुसन्धानकर्ताहरूलाई सफलताको रूपमा आएको छ किनकि प्राय जसो अल्जाइमर औषधीहरूले अल्जाइमर बिरामीहरूको दिमागमा रहेको एमाइलोइड प्लेक भण्डारलाई लक्षित गर्थे। Alzheimers ड्रग्स पछि धेरै सहयोग गरेन।
त्यहाँ व्यापक J147 क्लिनिकल परीक्षणहरू आएका छन्, र यो अहिलेसम्म प्रभावकारी र स्थिर मानिएको छ। आशाजनक J147 परीक्षण परिणामहरूको साथ, यो स्पष्ट छ कि J147 ले पार्किन्सन र स्ट्रोकको उपचारमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।
J147 neurogenerative रोगहरूको उपचारमा मद्दत गर्दछ।
यो एक प्रयोगात्मक औषधि हो जुन anti-एजिंग गुणहरू छन्।
J147 mitochondria (ऊर्जा को उत्पादन मा मद्दत कोशिका) फेला परेका प्रोटीन बाइन्डि by द्वारा काम गर्दछ।
सर्वश्रेष्ठ एंटीएजिंग नूट्रोपिक
११ शुद्धता- 11%% मैग्नीशियम एल-थ्रोनोनेट पाउडर 98 778571--57-।
के तपाईंले सोच्नुभएको छ कि तपाईंको संज्ञानात्मक क्षमता बुढ्यौलीको साथ पनि अक्षुण्ण रहन सक्छ? म्याग्नेशियम L-Threonate पाउडर एक अद्वितीय एल-थ्रोनिक एसिड म्याग्नेशियम नुन हो जुन दिमागमा म्याग्नीशियम पुनःपूर्ति गर्दछ, जसले यसलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा काम गर्दछ। यो बजारमा सब भन्दा उपलब्ध जैविक उपलब्ध म्याग्नेशियम हो।
म्याग्नेशियम L-Threonate पाउडर नूट्रोपिक मस्तिष्कमा पाइने हिप्पोक्याम्पस क्षेत्र वरिपरिको synaptic घनत्व वृद्धि गरेर काम गर्दछ। यो गरेर, यसले युवा र वृद्ध दुबैमा लामो, छोटो, र कार्य गर्ने मेमोरीलाई बढावा दिन्छ।
यसले शरीरमा कसैको म्याग्नेशियम स्थिति साथै तिनीहरूको संज्ञानात्मक क्षमताहरू पनि बढाउँदछ।
आदर्श म्याग्नेशियम L-Threonate खुराक 1500-2000mg हो
यसले बुढेसको कारण सम्झनालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ, र नयाँ मार्गहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ।
म्याग्नेशियम एल-थ्रीओनेट पहिलो पटक एमआईटीका अन्वेषकहरूद्वारा सिर्जना गरिएको थियो जसले नोबेल पुरस्कार विजेतालाई सम्मिलित गरेका थिए।
कार्डियाक प्रकार्यको प्रबर्धनमा उत्कृष्ट Nootropic
१२ शुद्धता- ≥%% निकोटीनामाइड रिबोसाइड क्लोराइड पाउडर २12११---98
निकोटिनमाइड राइबोसाइड क्लोराइड पाउडर बजारमा सबैभन्दा नयाँ निकोटिनमाइड एडेनिन डाइनोक्लियोटाइड हो, जुन भिटामिन अग्रदूत हो। यसको साथ फायदा यो छ कि यसलाई सजिलैसँग NAD + रूपान्तरण हुन्छ शरीरमा एकचोटि अन्य NAD + पूर्ववर्तीहरूको तुलनामा।
निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड बल्क पाउडरले तपाईको धमनीहरूमा उमेर सम्बन्धी परिवर्तनहरू बदल्दै हृदयको रोगबाट ग्रस्त हुने जोखिमलाई कम गर्दछ। NAD + स्तरहरू उठाउँदै, त्यहाँ बाक्लोपन, कठोरतामा कटौती हुन्छ जुन फलस्वरूप लचिलोपनमा थप गर्दछ।
अन्य निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड फाइदाहरूमा तौल घटाउन सहयोग गर्ने, क्यान्सर जोखिम कम गर्ने, जेट ल्यागको उपचारमा सहयोग गर्ने, र स्वस्थ मांसपेशीहरूको बुढ्यौलीलाई बढावा दिन सहयोग पुर्‍याउने कामहरू समावेश छन्।
साइड इफेक्टहरू महत्वहीन छन्, तर गहिराई एक उच्च खुराक संग बढ्न सक्छ।
यसले रगत NAD + स्तर २.2.7 पटक सम्म बढ्छ।
आदर्श निकोटिनमाइड राइबोसाइड क्लोराइड खुराक प्रति दिन 1000-2000mg हो।
यो धेरै कम निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड साइड इफेक्टको रिपोर्ट गरिएको साथ सुरक्षित छ।
मधुमेह उपचारका लागि उत्तम Nootropic
१ P शुद्धता ≥ 13 Gala गलान्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइड पाउडर 98 69353-२१-।
आज, मधुमेह एक अग्रणी अवस्था हो जुन मानिसहरूले विश्वव्यापी रूपमा पीडित छन्। भाग्यवस, यो नाइट्रोजन युक्त कम्पाउन्डले रोग प्रबन्ध गर्न मद्दतको लागि प्रमाणित गरेको छ। यसले ईन्सुलिन सaling्केत मार्गहरू सुधार गरेर गर्दछ। गलान्टामाइन हाइड्रोमाइडले ईन्फ्लेसन, इन्सुलिन प्रतिरोध, शरीरको तौल, र कोलेस्ट्रोलको स्तर कम गरेर मोटापा कम गर्दछ।
विगतमा, यो मांसपेशि कमजोरी र संवेदी को उपचार मा प्रयोग गरिएको छ, र मोटर dysfunction केन्द्रीय स्नायु प्रणाली विकार द्वारा ल्याए।
अन्य ग्यालेन्टामाइन हाइड्रोमाइड प्रयोगहरूले संज्ञानात्मक समारोहको बढावा, गठियाको दुखाइ कम गर्ने, र अटिस्टिक बच्चाहरू र अल्जाइमर रोगका लक्षणहरू सुधार गर्दछ।
यो काकेशियन स्नोड्रप, ड्याफोडिल, रातो स्पाइडर लिली, ग्यारन्थस वर्नोवी, र भोरोनोवको स्नोब्रपको फूल र बल्बबाट प्राप्त गरिन्छ।
गलान्टामाइन हाइड्रोमाइड राम्रोसँग अवशोषित हुन्छ, मौखिक जैव उपलब्धता 90% भएको।
यसले अल्जाइमर जस्ता डीजेनेरेटिव रोगहरूको व्यवस्थापनमा मद्दत गर्दछ जसले कसैको स्मृति, जागरूकता, र दैनिक कार्यहरू गर्ने क्षमतालाई बढाउँदै।
गर्भाशय ग्रीवाको क्यान्सरसँग लड्न सबै भन्दा राम्रो nootropic
१ P शुद्धता- 14%% कम्पाउन्ड P पी पाउडर १987०२०1890208--58-8
कम्पाउन्ड P पी पाउडर सेतोदेखि अफ-व्हाइट पाउडर हो जुन एक दुईवटा अभिनय थ्रॉमबक्सन रिसेप्टर एन्टगोनिस्ट इनहिबिटरहरू पहिचान गर्ने उद्देश्यको साथ श्रृंखला मिश्रणमा सिर्जना गरिएको थियो। नूट्रोपिक्स कम्पाउन्ड P पी पाउडरले अन्तराल77 सकारात्मक अक्षहरूको बृद्धि गर्दछ जसले भिभोमा एक्जोन पुनर्जन्मको उत्तेजना निम्त्याउँछ।
कम्पाउन्ड P पी ले सर्भिकल ट्यूमरसँग लड्न सब भन्दा बढि गतिविधि देखाएको छ एक खुराक निर्भर तरीकाले माइक्रोस्ट्रक्चर सुधार गरी।
केहि P पी पाउडर फाइदाहरू समावेश छन्; समन्वय वृद्धि, मदिरा सम्बन्धित ब्रेन क्षति को उपचार, र दिमाग वरिपरि अक्सिडेशन को रोकथाम। यसले कसैको मुड सुधार्न र थकावटसँग लड्न पनि मद्दत गर्दछ।
यो पानी र इथानोलमा अलि घुलनशील हुन्छ।
सुझाव गरीएको P पी पाउडरको खुराक m००mg को आसपास हुनुपर्दछ।
शिखरमा एक देखि दुई घण्टा लाग्छ।
सर्वश्रेष्ठ ग्लुटाथियोन बढाउने
१ P शुद्धता- 15%% N-Acetyl-L- सिस्टाइन ईथिल एस्टर पाउडर 98 59587-०-09--6
एन-एसिटिल-एल-सिस्टाइन ईथिल एस्टर (एनएसीईटी) एन-एसिटिल्सिस्टीन (एनएसी) को एस्टर रूप हो जहाँ एस्टरिफिकेशन एनएसीको लाइपोफिलीसीटी वृद्धि गर्न योगदान गर्दछ त्यसैले यसको फार्माकोकाइनेटिक्समा सुधार। यस सुविधाले यसको उच्च अवशोषणलाई थप गर्दछ जहाँ यो कोषहरूमा फस्न थाल्छ जुन सिस्टाइन र NAC मा यसको परिवर्तनको लागि अग्रणी हुन्छ।
यो एक धेरै उच्च मौखिक जैव उपलब्धता को साथ एक GSH अग्रदूत हो। NACET ले एनएसीलाई म्युकोलिटिक एजेन्टको रूपमा GSH- सम्बन्धित एन्टिऑक्सिडन्टको रूपमा, र प्यारासिटामोल एन्टिडोटको रूपमा काम गर्दछ।
पानी र जैविक सॉल्भेन्टमा स्वतन्त्र रूपमा घुलनशील।
यो प्रशासन पछि कोशाहरूमा द्रुत रूपमा समाहित हुन्छ।
NACETअल्जाइमर रोग जस्ता डिजनरेटिव रोगहरूको व्यवस्थापनमा मद्दत गर्दछ।
Nootropics खरीद गर्नु अघि के विचार गर्ने
सहि Nootropic छनौट गर्न केहि अनुसन्धान आवश्यक छ, तर यो यसको लायक छ किनकि यसले तपाईलाई खोजिरहनु भएको परिणामहरूको ग्यारेन्टी दिन्छ। यहाँ केहि कारकहरू छन् दिमागमा राख्नुको लागि नूट्रोपिक खोज्दा;
एक दिन मा एक पटक एक Nootropic लिदै र यो बिर्सनु को बारे मा सबै भन्दा मानिसहरु लाई लाग्न रोज्नु पर्छ। तर वास्तविक अर्थमा, एक उत्कृष्ट नूट्रोपिक फेला पार्छ जुन त्यस्तो खुराक अन्तरालसँग काम गर्दछ। दिनको दुई वा तीन चोटि लिन सकिने ती चीजहरूको लागि जानुहोस् जसले गर्दा तपाईंको शरीर एक शक डोजको तुलनामा दिनभर राम्रो तालिकाबद्ध खुराकको लागि प्रयोग हुन्छ।
तपाईं नूट्रोपिक्स किन्न चाहनुहुन्न जुन तपाईंको बजेट भन्दा पर छ। तपाईले विचार गर्नु पर्दछ कि ती सबै बिभिन्न छन् र उनीहरूको निर्माण विधिहरू मूल्य अप्रसन्न छन्। तपाईं नौंट्रोपिक्सको उच्च डोज खरीद गर्न अपेक्षा गर्नुहुन्न, बदाम मूल्यमा गुणस्तरीय सामग्री सहित। त्यसोभए सस्तोमा बसोबास गर्नु भन्दा पहिले निश्चित गर्नुहोस् कि यसले राम्रो काम गर्छ कि गर्दैन। यसको मतलब यो होइन, तपाईंले आफ्नो नूट्रोपिक्सलाई बढी पेस गर्नुभयो; तपाईको खल्तीमा के मिल्छ भनेर जान्नुहोस्।
प्रत्येक Nootropic यसको कारण प्रभाव छ। यदि तपाइँ एक चाहानुहुन्छ जसले तपाइँको फोकस बढाउन सक्छ, त्यहाँ एक छ। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं अल्जाइमर रोग नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राख्नुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले त्यसका लागि सबैभन्दा राम्रो खोजी गर्नु पर्छ।
साथै, केहि अरूलाई तुलनामा अधिक साइड इफेक्ट पैदा हुन सक्छ। कोही पनि स्कूलमा यती राम्रो प्रदर्शन गर्न चाहान्छन् कि कलेजोको विफलता मात्र समाप्त हुन्छ। जे भए पनि तपाईको स्वास्थ्य पहिले आउँछ, र तपाईले केहि लिन चाहनुहुन्न जसले सम्भाव्य रूपमा तपाईलाई हानी गर्दछ।
कहिलेकाहीँ, एक दुई वा बढी संयोजन गर्न चाहानुहुन्छ nootropics राम्रो संज्ञानात्मक प्रभाव प्राप्त गर्न। तपाइँ, जे होस्, ध्यान दिनुहोस् कि सबै nootropics सुरक्षित छैनन् जब स्ट्याक गरीएको छ। धेरै जसो स्ट्याक्स शक्ति बढाउन र साइड इफेक्ट कम गर्न को लागी जानिन्छ, केहि तपाइँको लागी असुरक्षित हुन सक्छ। तपाइँ, यसैले, प्रत्येक को लागी अवयवहरु जान्नु पर्छ र तरीका उनीहरु स्ट्याकि for को लागी किन्नु अघि उनीहरु अन्तरक्रिया।
एउटा थप कुरा हो कि तपाइँ को लागी बाहिर हेर्नु पर्छ मा गरिएको अनुसन्धान को मात्रा हो nootropic। केहि अनुसन्धान को समर्थन को कमी छ जबकि केहि मानव मा परीक्षण हुन सक्दैन। यस युग मा, त्यहाँ धेरै स्मार्ट औषधिहरु जसको अनुसन्धान संतोषजनक गरीएको छ।
त्यसोभए तपाईलाई केवल एक उत्पादन छनौट गर्न सुरक्षित हुनेछ जुन सन्तोषजनक रूपमा परीक्षण गरिएको थियो र प्रभावकारी भएको पुष्टि गरियो। यस मार्फत तपाईलाई मानसिक शान्तिको आश्वासनको साथसाथै तपाईलाई हानी पुर्‍याउने वा काम नगर्ने चीजहरू लिई पैसाको अपव्ययबाट जोगिनुहुन्छ।
विगतमा उनीहरूलाई प्रयोग गर्नेहरू द्वारा धेरैको बारेमा धेरै भनेका छन्। त्यस्ता जानकारीले तपाईंलाई उत्तममा बसोबास गर्न र नूट्रोपिक किन्ने कार्यलाई कम गर्न कम गर्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरूसँग जानुहोस् जुनसँग उत्तम समीक्षा र केहि नकारात्मक छन्।
सामान्यतया, कुनै पनि नोट्रोपिकमा तपाईंको पैसा खर्च गर्नु अघि विचार गर्न धेरै हुन्छ। उत्तम प्राप्त गर्नका लागि तपाईले दिईएको सबै पोइन्टहरूमा फ्याक्टर गर्नु पर्ने हुन्छ जुन बिन्दुको सबै अ if्क बनाउँछ भने।
Nootropics प्रयोगका फाइदाहरू
हरेक दिन, हामी एक किनारा को लागी खोजिरहेका छौं; केहि जसले हामीलाई अरु भन्दा राम्रो बनाउनेछ। के तपाइँ बक्स बाहिर सोच्नुभयो र को उपयोग लाई विचार गर्नुभयो nootropics एक तरीका हो कि आदर्श रूप मा तपाइँको जीवन एक बदलाव दिन सक्छ?
Nootropics को उपयोग धेरै लाभका साथ आउँदछ, र यदि तपाईंले एक Nootropic को प्रयोगको साथ महत्त्वपूर्ण परिणामहरू याद गर्नुभएन भने, तपाईं अधिक अपवादात्मक परिणामहरू हेर्न दुई वा बढिलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ।
तल केही नोट्रोपिक फाइदाहरू छन्;
तपाईंको एकाग्रता बढाउनुहोस्
के तपाईंले आफूलाई अरू नै सोच्दै पाउनुभयो जुन तपाईंले हातमा भएको कार्यसमेत बिर्सनुभयो? यो सामान्य हो, तर कहिलेकाहिँ तपाई यस्तो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ जुन एक पटकमा एउटा चीजमा ध्यान केन्द्रित गर्न समस्या भइरहेको छ यसैले अपूर्ण परियोजनाहरू र आधा बेक्ड विचारहरूको गुच्छा। भनेपछि तिमी के गरछौ त?
Nootropics लिई तपाईं अधिक ध्यान दिन र अधिक विस्तारित अवधि को लागी मद्दतको साथ साबित भएको छ। त्यस पछि तपाईले हरेक कार्यलाई ध्यान दिनुहोस् तपाईले चाहानुहुन्छ भने पनि दिनुहुन्छ जब कि तपाईले आफ्नो दिमागमा धेरै पाउनु भएको जस्तो लाग्छ।
हुनसक्छ तपाईंले कुनै विशेष शीर्षक पढ्नुभएको छ, यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ तर परीक्षाको दिन भन्दा अघि सबै कुरा बिर्सनुभयो। त्यसले तपाईलाई अब समस्या नपारोस्; Nootropics लिनु मानव स्मृतिको लागि उपयोगी साबित भएको छ।
यो एक को स्मृति को सबै भागहरु को बृद्धि र मर्मत को माध्यम बाट एक को सम्झना सुधार गर्दछ र सम्झना पनि। Nootropics ले मस्तिष्क कोशिका विकासलाई समर्थन गर्दछ र न्यूरन्सको जडान बढाउँछ। सुधारिएको जडान, समझ, र डाटा जानकारी को रिकल मार्फत विस्तार गरिएको छ।
तपाईंको समग्र दिमाग स्वास्थ्य सुधार गर्नुहोस्
मस्तिष्क शरीर को सबैभन्दा महत्वपूर्ण भागहरु मध्ये एक हो। यसको प्रदर्शन, तथापि, गरीब आहार र व्यस्त कार्यक्रम द्वारा प्रभावित हुन्छ। को उपयोग संग nootropics, तपाइँ न केवल तपाइँको मेमोरी बृद्धि भयो, तर मस्तिष्क को समग्र स्वास्थ्य पनि सुधार हुन्छ।
मस्तिष्कमा अक्सिजन प्रवाहको बृद्धि र न्यूरन्स र मस्तिष्क कोषहरूको मर्मतको माध्यमबाट हासिल गरिएको हो, जसले ब्रेनवेभलाई अझ प्रभावकारी बनाउँछ।
आफ्नो मूड उचाल्नुहोस्
एक गलत मूड तपाइँको दिन बर्बाद गर्न सक्छ र तपाइँ लाई तपाइँको गतिविधिहरु लाई गर्न को लागी उनीहरुलाई हुनु पर्छ। सौभाग्य देखि, त्यहाँ उपलब्ध उत्पादनहरु छन् कि राम्रो तपाइँको मूड, तपाइँ एक खुसी व्यक्ति बनाउन सक्नुहुन्छ। Nootropics यो डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँ फोकस गर्दै हुनुहुन्छ र तपाइँलाई हुन सक्ने कार्यहरुमा अधिक ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ।
वुड एस, सेज जेआर, अनाग्नोस्टारस एसजी (२०१ 2014)। "मनोवैज्ञानिक र अनुभूति: फार्माकोल। Rev. (66 (१): १ – ––२1।
फ्रेटी पी, किरियाकोउ सी, मारिनेल्ली ई, भेगाल्लो जीएम, जामी एस, बुसार्डो एफपी (२०१ 2015)। "संज्ञानात्मक र शारीरिक बृद्धिका लागि स्मार्ट ड्रग्स:। कर्ल न्यूरोफार्माकोल। १ ((१): –-११।
गिर्गेआ, कर्नेलियु, (जानुअरी, १ 1977 1) "Nootropic ड्रग्स"। न्यूरो-साइकोफार्माकोलोजीमा प्रगति। १: २––-२235।
१.विभिन्न प्रकारको नूट्रोपिक्स समझाईदै
२.२०१ in मा उत्कृष्ट १ smart स्मार्ट ड्रग नूट्रोपिक पाउडरको तुलना गर्नुहोस्
B.उत्तम समग्र नूट्रोपिक पाउडर
मेमोरी सुधारको लागि B.उत्तम नूट्रोपिक
एथलेटिक प्रदर्शनको लागि B.उत्तम नूट्रोपिक
6. जगाउने को लागी सबैभन्दा राम्रो Nootropic
B.उत्तम बुद्धिमत्ता वृद्धिकर्ता
B.उत्तम ध्यान प्रमोटर
9. उत्तम छिटो अभिनय nootropic
न्यूरोप्रोटिकेसनको लागि १०. सब भन्दा राम्रो नूट्रोपिक
११. उत्तम मानसिक बृद्धि गर्ने
१२. अल्जाइमर रोगको उपचारमा सबै भन्दा राम्रो nootropic
१..उत्तम एंटीएजिंग नूट्रोपिक
१.. कार्डियक समारोहको प्रबर्धनमा उत्कृष्ट नूट्रोपिक
१.. मधुमेह उपचारको लागि सबैभन्दा राम्रो Nootropic
१erv. सर्वाइकल क्यान्सरसँग लड्न सब भन्दा राम्रो nootropic
१.. उत्तम ग्लुटाथियोन बढाउने
१.. नूट्रोपिक्स किन्नु अघि के विचार गर्नु पर्छ
२०. नूट्रोपिक्स प्रयोग गरेर फाइदाहरू
Fulkazil अनलाइन खरीद गर्नुहोस् भन्छन्:
जनवरी 20, 2021 10 मा: 19 हूँ
Nootropic स्ट्याक UGGENT बाट थकित
week०० मिग्रा एड्राफिनल, १600०० ओक्सिरासिटाम, १ira०० एनिरासिटाम (ira1500० दिनमा दुई पटक) र गत हप्ताको लागि D1500 र B भिटामिन र अल्फा जीपीसी जस्ता अन्य चीजहरू, थकित महसुस र मेरो आँखामुनि कालो झोलाहरू जहिले पनि हुन्छ, सामान्यतया एक धेरै unmotivated व्यक्ति र सोच्दछ कि यसले मद्दत गर्दछ जसरी म जे भए पनि थकित महसुस गर्दछु, स्ट्याकले केही दिन काम गर्यो तर अब यस्तो महसुस भइरहेको छ कि म कुनै कामलाई तनाव र थकित महसुस नगरीकन गर्न सक्दिन, कुनै सल्लाह?
जनवरी 21, 20214मा: 13 हूँ
त्यो एक धेरै ठोस स्ट्याक हो। यति धेरै पटक नलिने प्रयास गर्नुहोस्? हप्तामा दुई पटक मात्र यसलाई प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, र वैकल्पिक प्रणाली प्रयोग गर्ने अन्य स्ट्याकहरूको साथ साइकलिंग। उदाहरण को लागी, म एक फेनिलिपिरासेटम / choline स्ट्याक र एक क्याफिन / theanine / uridine स्ट्याक बीच वैकल्पिक। कहिलेकाँही म ती मध्ये एकमा एसिटिल-एल-कार्निटिन जोड्नेछु।